wasiirka beeraha iyo waraabka xfs oo daahfuray mashruuca hormarinta Beeraha | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR wasiirka beeraha iyo waraabka xfs oo daahfuray mashruuca hormarinta Beeraha
wasiirka beeraha iyo waraabka xfs oo daahfuray mashruuca hormarinta Beeraha
Mashruucan ayaa waxuu ka kooban yahay dayactirka kanaalo dhirerkooda uu gaarayo ilaa iyo 8 km, dhul beerad dhan 400 hektar iyo qalab beerad lagu taageerayo beeralayda Soomaaliyeed, taasi oo lagu horumarinayo beerlayda yar yar.
Wasiirka Beeraha iyo waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxa ururka iskaashiga Islaamka ee OIC, ayaa ka shaqeynayo mashruucan lagu horumarinayo beerlayda Soomaaliyeed, waxaana mashuurcan ku taageeray dowladda Soomaaliya Mu’sasadda Boqar salaam Bin Cabdulsiis.
Ka dib kulan waqti kooban ay ku qaateen xafiiska Wasiirka Masuulinta ururuka iskaashiga islaamka iyo Madaxda Wasaaradda Beeraha, ayaa shir jaar’id warbaahinta ugu qabtay Xarunta Wasaaradda.
Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid, ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa’iideysanayaan beerlayada yar yar, islamarkaana tilmaayay in uu ahmiyad weyn uu ku fadhiyo.
Tani waxay qeexaysaa dadaalada lagu horumarinayo Beeraleyda ee ay wado Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda, iyaddoo muddo ka yar seddex bil ay heshiisyo dhaxal gal u ah horumarinta wax soo saarka dalka la gashay hay’addo caalami ah iyo dalal dhowr ah.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka oo sii wada diiwaan gelinta xisbiyada
Next articlewasiirka maaliyada oo sheegay in shacabka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin bixinta canshuurta